#Mareykanka oo beeniyay in uu dhimayo Ciidamad ka jooga Soomaaliya | Get Latest News From Horn of Africa
#Mareykanka oo beeniyay in uu dhimayo Ciidamad ka jooga Soomaaliya
By Wanaag On Jan 5, 2019
Ayadoo maanta warbaahinta Caalamka ay si weyn u tabineysay in Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qorsheenayo dhisita Ciidamada howlgalka kaga jooga Soomaaliya, ayaa waxa arrintaas beenisay Wasaarada Gaashaandhiga dalkaas.
Afhayeenadda Waaxda Difaaca Maraykanka ee The Pentagon”, Kandise Taresh ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin Wararka ay warbaahinta MSN NEWS ku sheegtay inay Maraykanka qorsheynayo in la yareeyo tiradda Hawlgalladda ay ka fuliyaan gudaha Somalia.
Tirada guud ee Ciiddanka Maraykanka ee ka hawl-gala gudaha Somalia waxaa lagu sheegay 500 Askari, kuwaasi oo ka qeyb qaata Hawlgalladda dhulka iyo duqeymaha ay Diyaaradaha Drones-ka geystaan.
Afhayeenadda Pentagon-ka oo la hadashay Idaacadda VOA-da ayaa sheegtay inaysan jirin Isbedel dhawaanahan lagu samaynayo Siyaaasadda Hawlgalladda ay Maraykanka ka fuliyaan gudaha Somalia.
Waxay sheegtay inay sii wadi doonaan Taageeradda ay DFS ka siiyaan dadaalka ay ugu jiraan sidii ay uga guuleysan lahaayeen Xarakadda Alshabaab, waa sida ay hadalka u dhigtay
Warbaahinta NBC NEWS waxay shalay sheegtay inay Dowladda Maraykanka qorshaynayso sidii loo yareyn lahaa Hawlgaladda ay ka waadaan Somalia, sababo la xiriira waxa lagu sheegay in Duqeymaha Cirka ee Maraykanka lagu dilay tiro ka mid ah Saraakiisha sarsare ee Alshabaab, waa sida ay hadalka u dhigeen.
Dhinaca kale, Saraakiisha Milliteriga Maraykanka waxay sheegeen inay hayaan tiro-koob ku aadan tirada Dagaalamayaasha Alshabaab iyo Kooxda Daacish, waxayna tilmaameen in tirada Dagaalamayaasha Alshabaab lagu qiyaasay 3,000 ilaa 7,000 oo Askari, halka Maleeshiyadda Kooxda Daacish-ta ku sugan Somalia waxaa lagu qiyaasay70 ilaa 250 Maleeshiyo.